Ny Vodin-Kazo Equestrian
Ny Vodin-Kazo Equestrian Ny sary amin'ny tetik'asa maritrano sy ny habakabaka Holistic dia mampivondrona ireo trano enina manambara ny mombamomba ny tsirairay. Fanitarana ny kianja filalaovana sy kianja mitaona ny votoatin'ny fitambarana fitantanana. Trano misy lafiny enina toy ny vatan'ny kristaly dia mitoetra ao anaty vatan-kazo toy ny amin'ny rojo. Telozoro rindrina voaravaka famafazana vera toy ny antsipirian'ny emeraoda. Ny fananganana fotsy miolaka dia manasongadina ny fidirana lehibe. Ny takelaka facades koa dia ampahany amin'ny habaka anatiny, izay ahitan'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny tranonkala mangarahara. Ny atitany dia manohy ny lohahevitr'ireo firafitra hazo, amin'ny alàlan'ny ambaratongam-pandrefesana mba hitoviana amin'ny ambaratonga maha-olombelona.
Club Fialam-Boly Miverina amin'ny fahatsoran'ny fiainana, ny masoandro amin'ny alàlan'ny hazavan'ny jiro sy ny alàlan'ny crisscrosses aloka. Mba hahitana taratra tsara kokoa ny tsiro voajanahary amin'ny habakabaka ankapobeny, ampiasao feno ny famolavolana hazo, tsotra sy kanto, fampiononana maha-olona, rivo-piainana kanto. Tonony manintona atsinanana, miaraka amina toetr'andro tsy manam-paharoa. Ity dia endrika iray hafa an'ny atitany, voajanahary, madio, miovaova izy io.
Ny Trano Fonenana Manaraka ny firafitry ny vohitra mahazatra Mani, ny hevitra dia raisina ho andiana sombin-vato tsirairay mihodina manodidina ny atrium, fidirana ary toerana onenana. Ny habetsaky ny fonenana dia manokatra fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny manodidina azy ireo, raha toa kosa ny gadona ny fisokafan'izy ireo dia manome antoka ny fiainana manokana na manasa amin'ny fomba fijery panoramika ny faravodilanitra, manangana traikefa mivantana amin'ny fitantarana mifandimby sy isan-karazany. Ny Villa dia miorina ao amin'ny Navarino Residences, fanangonana villa mihaja ho an'ny fananana manokana eo afovoan'ny Resort Navarino Dunes.
Foibe Fivarotana Ny endrika dia manambatra ny olona avaratra atsinanana amin'ny fahalemem-panahy sy fahasoavana avy any atsimo mba hamela ny fiainana ho feno. Ny famolavolana marani-tsaina sy ny firafitra kely dia manitatra ny maritrano anatiny. Mampiasa fahaiza-manao endrika tsotra sy iraisam-pirenena ny mpamorona miaraka amina singa madio sy akora tsotra, izay mahatonga ny habaka voajanahary, milamina ary tsy manam-paharoa. Ivotoerana fivarotana misy 600 metatra toradroa ny famolavolana, tanjona ny hamolavola ivontoerana fivarotana fiantsoana ankehitriny atsinanana, hahatonga ny fon'ilay mponina hangina ary hanary ny tabataba any ivelany. Aza miadana ary mankafiza ny fiainana mahafinaritra.
Foibe Fivarotana Ity famolavolana ity dia mikendry ny hitrandraka fomba hahazoana traikefa nahafinaritra amin'ny fiainana an-tanety amoron-tsiraka, izay manosika ny olona hikatsaka fiainana tsara ary hitarika ny olona hifindra any amin'ny fonenana tononkalo tatsinanana. Mampiasa fahaizana maoderina sy tsotra amin'ny endrika voajanahary sy tsotra ny mpamorona. Ny fifantohana amin'ny fanahy sy ny fanaovana tsinontsinona ny endrika, ny endrika dia mampifangaro ireo singa amin'ny kolontsaina Zen sy ny kolontsaina dite, ny fihetseham-pon'ireo mpanjono mahafinaritra, elo-taratasy elo. Amin'ny alàlan'ny fikirakirana antsipirihany, mandanjalanja ny fiasa sy ny hatsarana ary mahatonga ny velona ho kanto.
5 Elemente Ny Marika Divay Asabotsy 18 Septambra
Calendar 2014 “Botanical Life” Ny Kalandrie Zoma 17 Septambra
Calendar 2014 “Farm” Ny Kalandrie Alakamisy 16 Septambra
Ny Vodin-Kazo Equestrian Cafe Club Fialam-Boly Ny Trano Fonenana Foibe Fivarotana Foibe Fivarotana